Matte Madbakha Madoobaadka Hagayaasha nadiifka ah
Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Sida loo Nadiifiyo Matte Qasacadaha Madbakha Madoow
2021 / 01 / 28 QoondayntaTilmaamaha qasabada 1800 0
Matte madow waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu casrisan ee lagu dhameeyay goobta qasabadaha iyo jikooyinka kale iyo qalabka musqusha, waana mid caan ah. Inta udhaxeysa midabka cajiibka ah ee geesinimada leh iyo sheyga raaxada leh ee dhamaadka matte, qasabadahaani waxay caan ku yihiin guryaha adduunka oo dhan.
Dabcan, ka dib marka qasabadahaaga la rakibo, waxaad dooneysaa inaad hubiso inay sii ahaanayaan kuwa ugu fiican sidoo kale. Taas oo dhami waxay u soo degtay in iyaga loola dhaqmo si taxaddar leh loona isticmaalo alaabooyinka saxda ah iyo farsamooyinka lagu nadiifiyo. Tixgeli tan inay kuu noqoto hagaha khabiirkaaga si aad u ilaaliso qasnadahaaga matoorka jikada madow inay u muuqdaan kuwo cusub sanadaha soo socda.
Maxaan Ugu Baahanahay Inaan Nadiifiyo Matiga Madoow Qubeyska jikada?
Sababta ugu cad ee dadku u nadiifiyaan qasabadaha matoorka madow waa ujeedo muuqaal ah. Marka dhibcaha biyaha iyo haraaga kale ee dusha ka soo galaan qasabadahaaga, waxay carqaladeeyaan nadiifka, jilicsan, xitaa muuqaalka kugu soo jiitay inaad ku dhameysatid matte meesha ugu horeysa. Nadiifinta fudud waxay ku soo celin kartaa qasabadaha si loogu shubay, bannaanka sanduuqa.
Xaaladaha qaarkood, in kastoo, sugitaan aad u dheer si aad u nadiifiso qasabadaada ayaa dhaawici karta qasabadda sidoo kale. Haddii walxo ay taabtaan asiidhyada, dareeraha, ama kiimikooyin kale oo qallafsan oo ay ku fadhiistaan ​​qasabadda muddo, waxay cuni karaan dhamaadka.
Immisa jeer baan nadiifiyaa qasabadaha?
Guud ahaan, marka qasabadda jikadaadu u baahan tahay nadiifin, waad awoodi doontaa inaad aragto maxaa yeelay waxaad ku arki doontaa dhibco dusha sare. Si loo fududeeyo nolosha, hase yeeshe, waxaa ugu wanaagsan in si fudud loogu daro nadaafadda qasabadda nadaafaddaada toddobaadlaha ah. Waqti kasta oo aad nadiifinaysid jikadaada, sii tubbada nadiifin dhaqso leh adoo isticmaalaya tillaabooyinka hoos ku qoran.
Alaabooyin Ammaan ah oo lagu nadiifiyo qasabadaha madow ee Matta
Nooc kasta oo ka mid ah dusha gurigaaga, oo ay ku jiraan dusha qasabadda, waxay leeyihiin alaab nadaafadeed iyo qalab si fiican u shaqeynaya iyo kuwa kale oo ay tahay inaad iska ilaaliso. Wixii qasnado ah matoorada jikada madow, ku dheji alaabtan fudud.
Biyaha Saabuunta Cad
Marka laga hadlayo madow madow, doorashada nadiifinta nabdoon waa mid fudud: biyo saabuun aasaasi ah.
Isticmaal saabuun saxan oo dheellitiran oo dheellitiran oo pH ah - taas macnaheedu waa in saabuunku aanu aashito lahayn. Si fudud ugu qas qadar yar oo saabuunta weelka biyo ah waxaadna diyaar u tahay inaad baxdo.
Nadiifiyeyaasha Dusha sare ee Matte gaar ah
Haddii aadan hubin in saabuuntaada saxan ay tahay mid dheellitiran pH, waxaa sidoo kale jira nadiifiyeyaal qaas ah oo loogu talagalay dusha sare dusha sare. Astaamaha aasaasiga ah ee nadiifiyayaashan ayaa ah inaysan ku jirin mid ka mid ah kiimikooyinka caamka ah ee wax u dhimi kara dhammeynta maqaarka, oo aan hoos kaga hadli doonno.
Markaad nadiifinaysid qasabadaada madow ee madow, ka bood dhogorta birta ah, burushka xoqan, iyo waxyaabaha kale oo gaadho maro microfiber ah. Marooyinkani gaar ahaan waa jilicsan yihiin oo siman yihiin sidaa darteed waa kuwo jilicsan oo ku ilaalin kara dhammaystirka qasabaddaada.
Nadiifinta Alaabada iyo Farsamooyinka looga fogaado waxyaabaha Madoow ee isku dhafan
Waxaan dhamaanteen soo wada marnay waqtiyo aanan haysan alaabooyinka nadaafadda ee loogu talagalay ee aan u baahanahay sidaa darteed waxaan ku sameynay wax kale oo guriga gudihiisa ah. Taasi waxay noqon kartaa mid khatar ah, in kastoo, haddii aadan garanayn waxyaabaha ay tahay inaad si gaar ah isaga ilaaliso. Ka fogow badeecadahan inta aad nadiifinayso qasabadahaaga madow ee matoorka ah.
Badeecad kasta oo Wakiil Wax ama Wax Buuxin ah leh
Mid ka mid ah astaamaha ugu caansan uguna soo jiidashada badan ee matoorrada madoow ee matte waa iftiin la’aanta u gaarka ah. Soo-saareyaashu waxay soo saaraan saameyntan iyaga oo siinaya qasabadda shey-yar oo dusha sare ka dheregsan, oo ka buuxa buuro, burooyin, iyo dooxooyin.
Markuu iftiinku ku dhufto dusha sare, dusha sare ee jilicsan ayaa dib u soo noqda oo iftiimiya iftiinka dhammaan jihooyinka kala duwan. Tani waxay kala firdhisaa iftiinka sidaa darteed ma jiro milicsasho cad.
Qaabka wax u dhalaalaya iyo wakiilada kale ee wax buuxiya u shaqeeyaan waa iyada oo la buuxiyo cilladaha dusha sare, iyadoo la abuurayo dusha sare oo dusha sare leh oo leh iftiin kala duwan. Haddii aad ku isticmaasho alaabtan qasabaddaada matte, waxay ku buuxin doonaan buurahaas ujeeddooyinka leh iyo dooxooyinka dusha sare waxayna ka tagayaan tubooyinkaaga iyagoo dhalaalaya, sidoo kale.
Maskaxda ku hay in saameyntan dhalaalaysa badanaa aysan si siman u dhicin, sidoo kale. Waxay u egtahay inaad kudhamaato dhibco jilicsan oo dhalaalaya qasabadaada mar-matte ah.
Wax kasta oo Caustic ama Acidic ah ama Badeecado Ka Badan Kuwa Ay Ka Mid Yihiin Waxyaabaha Xalliya
Sida dhammeystir kale, dhammaystir madow oo madow ayaa si hufan u adeegsanaya soo-saaraha. Alaabooyinka ay ku jiraan asiidhyada ama dareerayaasha ayaa burburin kara dhamaadkaas. Tani waxay u horseedi kartaa midabyo aan sinnayn ama calaamadaha calaamadaha duugga hore ee nolosha qasabaddaada.
Acids iyo solvents ma aha alaabada kaliya ee dhaawici karta dhamaadka madow ee matte. Qaar ka mid ah alaabta wax lagu nadiifiyo waxaa loo dhisay nadiifinta qashinka adag si ay u yeeshaan wakiilo qoraal sameeya sida microbeads. Ka fogow noocyada noocan ah xalka nadiifinta inta aad isku dayeyso inaad cusbooneysiiso qasabadahaaga.
Dharka Nadiifinta Textured
Dhamaad kasta oo qasabaddu dhammaato way xoqmi kartaa, dhammaystirnaana waa madoow madow sidaas oo kale ma aha. Marka lagu daro inaad ka taxaddarto faraantiyada, furayaasha, iyo waxyaabaha kale ee xoqan, iska ilaali inaad isticmaasho burushyada iyo nooc kasta oo maro ah ama qalab nadiifin ah oo leh muuqaal qallafsan.
Sideen ku ogaadaa in alaabta nadiifintaydu ay ammaan u tahay qalabka madoow ee Matte?
Kawaran hadaad haysato shey aan kujirin liiska "samee" ama "ha sameyn" korka? Sideed ku ogaan kartaa inay nabad tahay?
Ugu dambeyntiina, waxaa fiican inaadan qatar gelin. Waxyaalo badan oo “all-Ujeeddo ah” sida nadiifiyeyaasha guud ayaa ku jiri doona xoogaa aashito ah. Haddii aadan hubin karin in alaabtu ay dheellitiran tahay pH ama haddii ay jiraan kiimikooyin ku jira liistada maaddooyinka oo aadan ogayn inay ammaan yihiin, iska jir.
Hadda oo aad haysatid safafkaaga alaab nadiifin oo wax ku ool ah, sidee u nadiifisaa qasabadaha matoorka jikada madow Raac talaabooyinkan fudud.
1. Isku qas Xalkaaga
Dadka badankood, xalka nadiifintoodu waa saabuun weel iyo biyo. Buuxso weelkaaga ama baaldi biyo ah, ku dar halbeeg saabuun ah, oo ku wareeji gacantaada si aad iskugu qasto.
2. Nadiifi Meelaha Dibadda
Adiga oo xalkaaga nadiifinta la diyaariyey, ku dhaji dharkaaga microfiber-ka xalka nadiifinta. Kadib, wac oo u isticmaal inaad ku tirtirto banaanka qasabadaada iyo qalabkaaga.
3. Nadiifi Gudaha Tuubada
Ka dib markaad nadiifiso banaanka qasabada, maradaada ku dhex mari gudaha sidoo kale qasabada. Haddii qasabadu leedahay hawo-socod, ka taxaddar inaadan isticmaalin cadaadis aad u badan si aadan u dhaawacin aerator-ka.
Waa muhiim in tan la sameeyo ka dib markaad nadiifiso bannaanka qasabadaada, maahan kahor. Waxaa jiri kara deebaajiin iyo jajabyo ka sameysan gudaha tubooyinkaaga, mana dooneysid in walxahaasi xoqmaan ama u hogaansamaan dhamaadka banaanka.
4. Biyo raaci oo qalaji
Ka dib markaad ku tirtirto qasabadahaaga xalka nadiifinta, hubi inaad ku biyo raaciso biyo macaan si aadan uga tagin wax hartay gadaal. Ugu dambeyntii, isticmaal shukumaan microfiber ama maro microfiber si aad ugu qalajiso banaanka tubooyinka.
Nidaamkani ma qaadanayo in ka badan dhowr daqiiqo waxayna u badan tahay inuu ka mid noqon doono shaqooyinka nadiifinta ee ugu fudud gurigaaga. Weli, la socoshada si joogto ah waxay ka dhigi kartaa adduunyo kala duwanaan ah ilaalinta qasabadaada oo u eg sida cusub.
Sideen uga Saaraa Goobaha Biyaha ee Matte Black Jikada Qasacada?
Tallaabooyinka kor ku xusan waxay u shaqeeyaan si qashin-qashin ah iyo wasakhda qasabadaha. Mararka qaarkood, hase yeeshe, waxaad yeelan kartaa baro biyo ah oo joogto ah oo ay adag tahay in laga saaro. Sideed uga takhalusi kartaa dhibcahaas madax adag?
Qasabadaha qasacadaysan ee madow, ikhtiyaarka ugu fiican ayaa ah xalka 50% khal iyo 50% biyo. U isticmaal xallintan si tartiib tartiib ah si aad u masaxdo dhibcaha biyaha, ka dibna si dhakhso leh ugu maydh qasabadda biyo nadiif ah kuna qalaji maro microfiber ah.
Maskaxda ku hay in dhibcaha biyaha qaarkood ay ka adkeysi badan yihiin kuwa kale. Isku day inaad ku nadiifi dhibcahaaga biyaha saabuun saabuunta ama nadiifiye dhammaystiran oo maadada ah marka hore. Kaliya isticmaal xalka khalka haddii xulashooyinka kale aysan shaqeyn.
Nadiifinta Aerator-ka Qalabka qasacadaysan ee Madoow
Tallaabooyinka kor ku xusan waxay ku habboon yihiin nadiifinta guud ee qasabadda madow ee caadiga ah. Si kastaba ha noqotee, haddii qasabadaadu leedahay hawo-wade, waxaad u baahan doontaa inaad nadiifiso aerator-ka waqti ka waqti, sidoo kale.
Qalabka hawada ayaa u muuqda shaashad yar oo ku dhex jirta qasabaddaada. Qaboojiyeyaasha ayaa sifeeya biyahaaga sida ay u soo baxaan iyagoo waliba ku daraya xoogaa hawo qulqulka biyaha. Tani waxay siinaysaa durdurku qaab jilicsan.
Maxaan Ugu Baahanahay Inaan Nadiifiyo Qeexiyaha Qasacadeyda jikada?
Sida caawiyaha hawadu u caawin karto, qayb ka mid ah shaqadeedu waa inay ka sifeeyaan walxaha iyo dhigaalka biyahaaga. Qaybahaasi ma baaba'aan; waxay ku dhismi karaan kor u-qaadista ama gudaha gudaha hawada. Tani waxay sii adkeyneysaa helitaanka biyo nadiif ah, mararka qaarkoodna, jajabku wuu dhismi karaa si uu u xannibo socodka biyaha tubadaada.
Immisa jeer baan nadiifiyaa Af-hayeenkayga?
Haddii aerator ku haysto qasabaddaada, jadwalkaaga nadaafaddu waa inuu ku xirnaadaa inta jeer ee aad isticmaaleyso. Wixii qasabad loo isticmaalo maalin kasta sida qasabada caadiga ah ee jikada, ujeedadeedu waa inaad nadiifiso aerator-ka bishiiba mar. Tuubbooyinka aan sida badan la isticmaalin, nadiifinta saddexdii biloodba mar way shaqeyn kartaa.
Waxa kale oo aad u baahan doontaa inaad nadiifiso aerator-kaaga wakhti kasta oo ay u muuqato inuu xidhan yahay. Haddii socodka biyaha tuubadaadu hoos u dhacday, badiyaa waa calaamad muujinaysa inaad u baahan tahay inaad nadiifiso aerator-kaaga.
Sida loo Nadiifiyo Qaswada Jiriyaha
Nadiifinta aerator-kaaga ayaa ka dhib badan nadiifinta qasabadaada, laakiin wali waa lagu sameyn karaa daqiiqado yar gudahood waana qeyb lagama maarmaan u ah in jadwalkaagu si habsami leh u socdo. Raac talaabooyinkan cad.
1. Saar Aerator-ka
Xaaladaha badankood, duufsadahaagu wuxuu ku dhex jiri doonaa dabool gudaha dhamaadka tuubadaada si aad si fudud uga furtid daboolkaas. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad isticmaasho xirmo ama shay kale si aad u xajisato waxyaabaha la gelinayo, laakiin noqo mid jilicsan si aadan u dhaawicin gabalka. Haddii aadan hubin sida looga saaro duufiyahaaga, waa khamaar aamin ah inaad hubiso tilmaamaha soo-saaraha.
2. Diyaari Xalkaaga Nadiifinta
Sida nadiifinta qasabadaada dibedda, waxaad isticmaali kartaa xalka fudud ee biyaha iyo saabuunta weelka si aad u nadiifiso aerator-kaaga. Haddii runtii aad leedahay wasakh adag, waxaad sidoo kale isku dari kartaa xal saddex qaybood oo biyo ah iyo hal qayb khal.
3. Nadiifi Dareeraha
U isticmaal maro, maro, ama isbuunbo xalkaaga nadiifinta ah si aad u xoqdid dhaqaaqa hawada. Waa inaad awood u yeelatid inaad aragto walxaha jajabaya, marka sifeeq badanaa si tartiib ah u dhaq si aad u maydho walxahaas. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa burush caday oo duug ah si aad u gasho meelaha yaryar ee ku jira shaashadda hawada.
Waxaad awoodi doontaa inaad u sheegto inuu hawadu nadiif yahay kormeer muuqaal oo fudud. Sii markii ugu dambeysay ee lagu luqluqo ka dibna ku qalaji maro nadiif ah ama tuwaal.
4. Dib isugu soo ururi qasabada
Iyada oo nadiifiyahaagu nadiif yahay, waxaa la joogaa waqtigii dib la isugu soo wada celin lahaa. Ku beddel walxaha ku jira furka fur si la mid ah kii ay ku jireen markii aad kala furfuraysay oo waxaad galisay qaybta dambe ee qasabadda. Haddii aadan hubin inaad si sax ah u sameyneyso, hubi tilmaamaha soo saaraha qasabadda.
Raacitaanka talaabooyinkan bil kasta ama wax la mid ah waxay kaa caawin doontaa inaad nadiifiyahaaga ka dhigto mid nadiif ah oo shaqeynaya, adiga oo nadiifinaya biyahaaga inta ay socoto. Maskaxda ku hay in haddii aadan awoodin inaad si fiican u nadiifiso aerator-kaaga, waxaad awoodi kartaa inaad ka soo iibsato aerator beddel ah soo saaraha halkii aad ka beddeli lahayd qasabadda oo dhan.
Haysashada qasnadahaaga Madoow ee Madoobaadka Cusub oo nadiif ah
Matte-yada madow ee madow waxay leeyihiin muuqaal raaxo leh oo casri ah, oo casri ah, taas oo ah sababta ay caan uga yihiin guryaha ku yaal dhammaan gobollada iyo dhibcaha qiimaha. Waxay kaliya eegaan sida ugufiican hadaad nadiifiso oo aad sifiican u ilaaliso, in kastoo. Nasiib wanaagse, taasi waa wax fudud sida xoogaa saabuun saxan ah, biyo, iyo maro jilicsan toddobaad kasta ama wixii la mid ah.
Haddii aad ka fekereyso inaad ku dhejisato meelo badan oo gurigaaga ka mid ah qasabadaha madow ama haddii aad weli ugaarsanaysid qasabadaha jikada ee ugufiican meesha ugu horeysa, hubi hagayaasheena iibsiga qasabada.
Matte Madbakha Madbakha Alaabada Lagu Taliyay
Hal-Gacan-ku-Jiid-Buufiyaha Jikada Buufiyaha
Madoobaha Madbakha Madow
Matte Black Jikada Mashiinka Mashiinka
Matte Black jiid-Down Buufiyo Jikada qasabadda
Hore:: Sida loo doorto Qasabada Musqusha: Tilmaamaha Iibsiga ee 2021 Next: Faallooyinka tubada Musqusha Delta: 2021 Tilmaamaha Iibsiga ee qasabadaha Delta Musqusha
2021 / 05 / 13 1075
2021 / 05 / 09 786
Faallooyinka qasabadda Delta: Tilmaamaha Iibsiga ee 2021 ee qasabadaha Delta jikada
2021 / 05 / 08 673
2021 / 02 / 04 750
2021 / 02 / 03 782
2021 / 02 / 03 878